Baby Skin လေး ပိုင်ဆိုင်ချင်လား ❓ ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို New Skiin ရဲ့ Sleeping Cream လိမ်းလိုက်တာနဲ့ အရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး နူးညံ့တဲ့ Baby Skin လေး ပြန်ရသွားစေမှာနော် ? New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ဟာ အစိုဓါတ် နှင့် အာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အရေပြားပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ Cream အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြန်လည်လန်းဆန်းရှင်သန်နုပျိုလာစေပါတယ်။ စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ သင့်အရေပြားကို အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစေကာ သန့်စင်ကျန်းမာသော အသားအရေကို ရရှိလာစေပါတယ်။ Adenosine က အရေးအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး Niacinamide က သင့်အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေတာကြောင့် မနက်အိပ်ယာထချိန်မှာ သင်စိတ်တိုင်းကျတဲ့ နုပျိုလှပတဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းချင်သူများကလည်း မနက်ပိုင်း New Skiin Sleeping Cream ကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
အရေပြား ပျက်စီးခြင်း အမျိုးမျိုးကို အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream နေပူလိုက် မိုးရွာလိုက်နဲ့ ရာသီဉတုကြောင့် အရေပြား ပျက်စီး ထိခိုက်နေပြီဆိုရင် Skin Barrier ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးတဲ့ New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ရှိပါတယ်။ Sleeping Cream က သင့်အသားအရေကို ပြည့်ဝသော အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်တို့ကို ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းထားတော့ တစ်နေ့လုံး အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး အရေပြားကြမ်းတမ်းနေတဲ့နေရာများကိုလည်း နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ ? သုံးစွဲပုံ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် သင့်တော်သောပမာဏကိုယူပြီး မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပဲ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါပြီ။ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းချင်သူများကလည်း နံနက်ပိုင်း Sleeping Cream ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Sleeping Cream က သင့်အရေပြားကို အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
New Skiin Sleeping Cream နဲ့ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်မယ် ? ပူပြင်းလွန်းတဲ့ ညတွေမှာ အေးမြတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ဆုံးက New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ပါ..... Sleeping Cream မှာပါဝင်တဲ့ Hyaluronic Acid က အသားအရေကို ရေဓါတ် ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်ပေးတာကြောင့် ညအိပ်ယာမဝင်ခင်တိုင်း လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ကြည်လင်လန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေလေးကို နေ့တိုင်း ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
#ခွဲမရတဲ့အတွဲလေး New Skiin Sleeping Cream နဲ့ Snail လေးကို ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း တွဲလိမ်းလိုက်လို့ကတော့ နုဖက်အုအက်နေတဲ့ အသားအရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ All Skin Type သုံးလို့ရပြီး Sensitive Skin တွေပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ Good Night Sleep Tight ? Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ် #SnailWhiteningCream #NewSkiin #Aqua_Luminous_Sleeping_Cream #FocusBeauty
"New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream" အရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး နူးညံ့တဲ့ Baby Skin လေးပြန်ရဖို့အတွက်ကတော့ New Skiin ရဲ့ Sleeping Cream လေး လိမ်းမှဖြစ်မယ်နော် New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ဟာ အစိုဓါတ် နှင့် အာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အရေပြားပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ Cream အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြန်လည်လန်းဆန်းရှင်သန်နုပျိုလာစေပါတယ်။ စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ သင့်အရေပြားကို အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစေကာ သန့်စင်ကျန်းမာသော အသားအရေကို ရရှိလာစေပါတယ်။ Adenosine က အရေးအကြောင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး Niacinamide က သင့်အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေတာကြောင့် မနက်အိပ်ယာထချိန်မှာ သင်စိတ်တိုင်းကျတဲ့ နုပျိုလှပတဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ သင့်အသားအရေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာစေမှာလဲ ❓ သင်အိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း Sleeping Cream က သင့်အသားအရေကို ပြည့်ဝသော အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်တို့ကို ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းထားတော့ တစ်နေ့လုံး အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး အရေပြားကြမ်းတမ်းနေတဲ့နေရာများကိုလည်း နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ Sleeping Cream က Skin Barrier ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရာသီဥတုကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ထိခိုက်ခြင်း ၊ ခရီးပမ်းပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားသော အရေပြား ပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးကနေ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းလာစေပါတယ်။ ? ပါဝင်ပစ္စည်းများ Niacinamide အရေပြားဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုအားပေးပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရောင်ကို ဖြူဝင်းလာစေပြီး အသားအရောင်ညီညာလာစေပါတယ်။ Adenosine အရေပြားဆဲလ်များကို အားအင်ပြည့်ဝလာစေပြီး အရေးအကြောင်းများကို လျော့ချပေးပါတယ်။ Baby Skin ကဲ့သို့ နူးညံ့ချောမွတ်သော အသားအရေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Seawater Seawater က သင့်အရေပြားကို သတ္တုဓါတ်များဖြင့် ပြည့်ဝလာစေပြီး တင်းရင်းလာစေပါတယ်။ Hyaluronic Acid Hyaluronic Acid က အရေပြားကို ရေဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract နှင့် Organum Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract တို့က အရေပြားရောင်ရမ်းမှုများကို လျော့ကျစေပြီး ပိုးမွားများဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးကာ အသားအရေကို ကျန်းမာလာစေပါတယ်။ #Skin_Types အသားအရေအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ? သုံးစွဲပုံ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် သင့်တော်သောပမာဏကိုယူပြီး မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပဲ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါပြီ။ သင်အိပ်စက်နေသော အချိန်ကာလအတွင်း New Skiin Sleeping Cream က သင့်အရေပြားကို အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
"New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream" အရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး နူးညံ့တဲ့ Baby Skin လေးပြန်ရဖို့အတွက်ကတော့ New Skiin ရဲ့ Sleeping Cream လေး လိမ်းမှဖြစ်မယ်နော် New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ဟာ အစိုဓါတ် နှင့် အာဟာရဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး အရေပြားပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ Cream အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့ သင့်အသားအရေကို ပြန်လည်လန်းဆန်းရှင်သန်နုပျိုလာစေပါတယ်။ စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ သင့်အရေပြားကို အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစေကာ သန့်စင်ကျန်းမာသော အသားအရေကို ရရှိလာစေပါတယ်။ Adenosine က အရေးအ‌အကြောင်းများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး Niacinamide က သင့်အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေတာကြောင့် မနက်အိပ်ယာထချိန်မှာ သင်စိတ်တိုင်းကျတဲ့ နုပျိုလှပတဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ သင့်အသားအရေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာစေမှာလဲ ❓ သင်အိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း Sleeping Cream က သင့်အသားအရေကို ပြည့်ဝသော အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်တို့ကို ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းထားတော့ တစ်နေ့လုံး အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး အရေပြားကြမ်းတမ်းနေတဲ့နေရာများကိုလည်း နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ Sleeping Cream က Skin Barrier ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရာသီဥတုကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ထိခိုက်ခြင်း ၊ ခရီးပမ်းပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားသော အရေပြား ပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးကနေ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းလာစေပါတယ်။ ? ပါဝင်ပစ္စည်းများ Niacinamide အရေပြားဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုအားပေးပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရောင်ကို ဖြူဝင်းလာစေပြီး အသားအရောင်ညီညာလာစေပါတယ်။ Adenosine အရေပြားဆဲလ်များကို အားအင်ပြည့်ဝလာစေပြီး အရေးအကြောင်းများကို လျော့ချပေးပါတယ်။ Baby Skin ကဲ့သို့ နူးညံ့ချောမွတ်သော အသားအရေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Seawater Seawater က သင့်အရေပြားကို သတ္တုဓါတ်များဖြင့် ပြည့်ဝလာစေပြီး တင်းရင်းလာစေပါတယ်။ Hyaluronic Acid Hyaluronic Acid က အရေပြားကို ရေဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract နှင့် Organum Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract တို့က အရေပြားရောင်ရမ်းမှုများကို လျော့ကျစေပြီး ပိုးမွားများဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးကာ အသားအရေကို ကျန်းမာလာစေပါတယ်။ #Skin_Types အသားအရေအမျိုးအစားတိုင်းအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ? သုံးစွဲပုံ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် သင့်တော်သောပမာဏကိုယူပြီး မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပဲ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါပြီ။ သင်အိပ်စက်နေသော အချိန်ကာလအတွင်း New Skiin Sleeping Cream က သင့်အရေပြားကို အာဟာရနှင့် အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?